आर्थिक अभावले सोचेअनुसार काम गर्न सकिएन
नगरप्रमुख, मुसीकोट नगरपालिका, गुल्मी
मुसीकोट नगरपालिकाका प्रमुख सोमनाथ सापकोटा नगर विकासका लागि आवश्यक पर्याप्त बजेट नहुँदा सोचेअनुसारको काम गर्न नसकिएको बताउँछन् । नगर प्रमुख सापकोटासँग जनप्रतिनिधिका रूपमा काम गर्दाको अनुभव, मुसीकोटको विकास निर्माणलगायत विषयमा गरिएको कुराकानी ः
नगर प्रमुखका रूपमा चार वर्ष काम गर्दाको अनुभव कस्तो रह्यो ?
निर्वाचित भएर आएको चार वर्ष बित्यो । यो वर्षको अन्तिमसम्म निर्वाचन हुनेछ । यो नयाँ नगरपालिका हो । हामीले नयाँ भएकाले सबै काम सुरुबाटै गर्नुपर्‍यो । कार्यालय निर्माणदेखि सबै सेवा–सुविधा दिन सक्ने स्थानीय तह बन्नुपर्ने भएकाले हामीले त्यसतर्फ ध्यान दिऔँ । जनताले परिवर्तनको अनुभूति हामीसँगै गरेका छन् । जनतासँगको नजिक भएको सरकार भएकाले पनि स्थानीय सरकारलाई नै बढी विश्वास गरे । तर, हामीले कर्मचारी र आर्थिक अभावका कारण चाहेजति काम गर्न सकेनौँ ।
चार वर्षमा मुसीकोटबासीले अनुभव गर्ने खाले के परिवर्तन भए ?
हामी निर्वाचित भएर आएपछि सय दिने कामको योजना बनाएर सबै घरमा बत्ती पुर्याउने काम ग¥यौँ । नगरभित्रका ४९६ घरधुरीमा बत्ती पुगेको थिएन । हामीले सबै ठाउँमा बत्ती पु¥याऔँ । दोस्रो वर्षमा सबै वस्तीलाई सडक सञ्जालमा जोड्न सफल भयौँ । तेस्रो र चौथो वर्षमा हामीले खानेपानीमा एक घर, एक धारा कार्यक्रम अघि बढाएका छौँ । लगभग त्यो पनि पूरा हुनेछ ।
तपाईंले विकास निर्माणका लागि विशेष पहल गरेको क्षेत्रचाहिँ कुन हो ?
हामीले सबै क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । प्रत्येक वर्ष कुनै न कुनै एक विषयलाई प्राथमिकता दिनैपर्छ । सबैमा बजेट छु्ट्याए पनि केही योजनामा प्राथमिकता दिनुपर्ने भएकाले जनजीविकाका सवाललाई प्राथमिकतामा राख्यौँ । खरका छानामुक्त नगरपालिका घोषणा गर्ने तयारीमा छौँ ।
स्वास्थ्य र शिक्षामा नगरपालिकाले कस्ता योजना अघि सारेको छ ?
हामीले स्वास्थ्य र शिक्षामा पनि ध्यान दिएका छौँ । नगरपालिका स्थापना भएकै वर्ष ५ वटा स्वास्थ्य इकाइ स्थापना ग¥यौँ । हामीसँग अहिले १२ वटा इकाइ छनु । यहीमार्फत प्रारम्भिक स्वास्थ्योपचार दिएका छौँ । नगरपालिकामा १५ शय्याको अस्पताल निर्माण गरिरहेका छौँ । सुत्केरी सेवालाई व्यवस्थित बनाएका छौँ । यसबीचमा हामीले अरू सूचकांक पनि बढाउँदै लगेका छौँ ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिले आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गरेको थुप्रै उदाहरण छन् । तपाईंको पालिकामा बेरुजुको अवस्था कस्तो छ ?
हाम्रोमा जटिल छ । हामीले नियम, नीति, कागज नपु¥याउँदा बेरुजु देखिएको हो । हाम्रोमा ७ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । त्यो नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु हो । असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु छ । ५ करोड रुपैयाँ बेरुजु फस्र्योट गर्ने हाम्रो योजना छ ।
अन्त्यमा, तपाईंलाई भन्न मन लागेका केही कुरा छन् कि ?
नगरपालिका स्थापना भएदेखि नै हामीले कृषि, पर्यटन र उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ । थुप्रै स्वरोजगारका कार्यक्रम अघि बढाएका छौँ । कफी उत्पादन, व्यावसायिक कृषि क्षेत्रका लागि पनि विभिन्न काम गरेका छौँ । हामीले पाँच वर्षअघिको नगरपालिका र हामीले कार्यकाल सकाउँदै गर्दा आधारभूत कामबाहेक जनताको जीविका परिवर्तन हुने गरी थुप्रै काम गरेका छौँ । सयौँ युवा स्वरोजगार बनेका छन् ।
राम मन्दिर बनाएरै छाड्छौँ
कर्मचारी अभाव र कानुन नबन्दा अप्ठेरो छ
केन्द्रका कुरै नगरौँ, प्रदेशबाट पनि ठगिएका छौँ
संघको रोजाइमा कहिल्यै परेनौँ
आर्थिक अनुशासनकै कारण बागमतीकै कम बेरुजु भएको पालि…
स्थानीय तहमा सबै सत्तापक्ष